> Resource > Beddelaan > Converter VOB: Sida loo badalo files VOB
Wondershare VOB Converter waa video Converter smart degdeg diinta super si degdeg ah oo tayo leh diinta ka sare. Waxay kuu ogolaanaysaa inaad si loogu badalo files VOB in ku dhowaad video / audio qaab kasta, sida AVI, wmv, MOV, MKV, M4V, 3GP, MP4, MP3 iwm Wixii kuwa doonaya in loogu badalo in ay VOB ka qaabab kale oo DVD gubashadii dheeraad ah, Converter file VOB waa shaki ku jirin doorashada ugu fiican. Waxay u bedeli karaan wax files kale si VOB iyo sidoo kale iyaga gubi in DVD si toos ah in this app, taas oo si weyn u fududayn kara shaqooyinkooda.
1 files Add to Converter VOB ah
Marka aad si guul leh u soo bixi oo lagu rakibay on your computer, kaliya laba jibaar guji desktop icon app ee ah in ay galaan ay interface ugu weyn. Ka dib markii in, aad u baahan tahay si ay u dajiyaan video files si ay kuu bilaabay. Just riix "Add Files" button xitaa your computer si ay u doortaan faylasha aad rabto in aad si loogu badalo. Dhammaan files keeno muuqan doonaa sida thumbnail ee guddiga bidix ee this Converter file VOB.
Ka hor inta diinta iyo gubasho, haddii aad rabto in aad wax ka bedel qaar ka mid ah file video, kaliya xaq u riix oo taga si "Edit" menu si aad u ogaato fursadaha video tafatir sida goo, darsamaan, dalagga, isku shaandheyn, watermark, saamaynta, iwm
Liiska hoos-hoos qaab saarka Open ee "Output Qaabka" Murayaad, halkan waxaad ka heli kartaa dhammaan qaababka wax soo saarka caanka ah, oo ay ka mid caadi video / qaab maqal ah (MP4, MOV, AVI, VOB, MP3, iwm), DVD (oo ay ku jiraan DVD folder iyo ISO) iyo qaabka 3D cusub. Waxaa sidoo kale jira qaab filaayo in badan qalabka sida ku cad qalabka Apple, PSP, telefoonada HTC iyo wixii la mid ah.
Dooro qaab doonayo sidii qaab wax soo saarka. Haddii aad rabto in aad ku gubi DVD ah, ee "Guba" interface, dajiyaan faylasha aad dooro aad jeceshahay template DVD menu, socda, dhufatey "Guba" button ee geeska hoose ee midig si ay u bilaabaan DVD gubanaya.
Ogow in haddii aad qorshaynaysid in aad ku gubi DVD, waxaad u baahan doontaa ah gubi drive DVD iyo geliso ah DVD5 ama DVD9 cajalladaha ku dhammayn lahaa.
3 diinta VOB badalo
Intii aanay iyo gubasho, inaad si fiican u lahaa inaan ku eegaan aad mashruuc suuqa kala Falanqeynta ama meel DVD menu qoraalka ah. Marka aad ku qanacsanayn saameynta, kaliya ku dhufatey "Beddelaan" ama "Guba" button in aynu Converter VOB samayn wax intiisa kale.
Dadka isticmaala Mac, haddii u baahan, wuxuu kuu diri karaa halkan: sida loo isticmaalo Converter VOB u Mac talaabo talaabo ah.
Haddii aad rabto in aad si loogu badalo VOB in MP4, sidoo kale waxaad ka arki kartaa: sida loo badalo VOB in MP4 .
Features Key ee VOB Converter
Beddelaan files VOB in gebi ahaanba qaab kasta si fudud oo dhaqso
Si fudud gubi videos VOB in disc DVD, DVD folder, ama inay faylasha ISO
Bixiya badan oo lacag la'aan ah iyo qabow arrimo DVD menu
Edit VOB videos la qaababka badan oo tafatir qabow
Beddelaan videos VOB in 3D videos
Beddelaan DVD in qaab kasta oo video / audio ka mid yihiin VOB
Download online videos in qaab kasta oo ay ka mid yihiin VOB